हेलो शुक्रबार - कान्तिपुर समाचार
चर्चाले कलाकारको पारिश्रमिकमा प्रत्यक्ष फाइदा पुर्‍याउने गर्छ । ‘भर्चुअल सोसाइटी’ को अहिलेको जमानामा सामाजिक सञ्जालमा देखिने कलाकारको फ्यान फलोइङ र उसका कामले सिर्जना गर्ने ट्रेन्डिङले सेलिब्रिटी निर्धारण गरिरहेको छ । पछिल्ला वर्ष नेपाली फिल्मका हिरो/हिरोइनको क्रेज पनि बढ्दो छ ।
ट्रु कलरमा कल रेकर्ड
आफ्नो फोनमा सेभ नभएको नम्बरको नाम पनि देखाउने भएकाले ट्रु कलर प्रयोगकर्तामाझ निकै लोकप्रिय छ । नचिनेको नम्बरबाट कल आउँदा नाम देखाउने भएकाले यसको व्यापकता बढेको हो ।
ट्वीटर सोझै फेसबुकमा सेयर गर्न नमिल्ने
धेरै ट्वीटर प्रयोगकर्ताहरू आफ्नो फेसबुक एकाउन्ट ट्वीटर एकाउन्टमा लिंक गरी आफ्ना हरेक ट्वीट फेसबुकमा सेयर गर्ने गर्छन् । यसो गर्दा प्रयोगकर्तालाई एउटै पोस्ट दुई पटक लेख्ने झन्झट हुँदैन ।
म्युजिकल्ली अब टिकटक
छोटो भिडियो सेयर गर्ने एप म्युजिकल्ली टिकटकले किनेको छ । बिक्रीसँगै म्युजिकल्ली टिकटक नाममा रूपान्तरित भएको छ । यसका प्रयोगकर्ताले टिकटक नाममा यसको अपडेट पाइसकेका छन् । म्युजिकल्लीको लोगोसमेत अपडेट भइसकेको छ । टिकटक म्युजिकल्ली जस्तै सेवा दिने कम्पनी हो । म्युजिकल्लीका प्रयोगकर्ता पनि स्वत: टिकटकका प्रयोगकर्ता बनेका छन् ।
प्रविधिको व्यवसायमा अग्रणी अमेरिकी कम्पनी एप्पल इन्क गत साता १ ट्रिलियन डलरको पहिलो कम्पनी बन्यो । उसको व्यावसायिक ग्राफ :
गुगलले आफ्नो अपरेटिङ सिस्टम एन्ड्रोइडको पछिल्लो संस्करण पि–पिक्सेल फोनहरूमा उपलब्ध गराएको छ । योभन्दा अर्को कुरा, उसले एन्ड्रोइड पीको आधिाकारिक नाम एन्ड्रोइड पाई राखेको छ । यो अहिले गुगलका पिक्सेल फोनमा मात्रै उपलब्ध भए पनि सबै फोनका लागि उपलब्ध हुन केही महिना कुर्नुपर्ने हुन्छ । तर, पनि यसमा त्यस्ता के विशेषता छन् जसले यसलाई फरक स्मार्टफोन बनाएको छ ? यसको खुल्दुली हुनु स्वाभाविक नै हो । एन्ड्रोइड पाईका विशेषताबारे यहाँ चर्चा गरिनेछ ।
जीएनआरको पुनर्मिलन !
सन् २०१६ मा मात्र हो, स्लाय्स र म्याककगन फर्किंदा जीएनआरको पूरा क्लासिक लाइन–अप बन्यो । ‘नट इन दिस लाइफटाइम टुर’ चलिरहेको एक वर्ष बढी भइसक्यो । केही समय अगाडि मात्र जीएनआरले पहिलो एल्बम ‘एपटाइट फर डिस्ट्रक्सन’ फेरि बजारमा ल्यायो, डिलक्स रि–इस्युका रुपमा । ठ्याक्कै ३० वर्ष अगाडि यो चार्ट्सको शीर्ष स्थानमा थियो, अहिले पनि नम्बर १ मा पुगेको छ ।
सिरहा सुखीपुर नगरपालिका ४ स्थित कविलासीका सुनील यादवले भारतको चेन्नाईबाट बीई सिभिल इन्जिनियर सकेलगत्तै दार्चुलास्थित चमेलिया जलविद्युत्को थलीघाट सबस्टेसनमा एक वर्ष काम गरे । अनि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणतर्फ लागे । खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका ३ मा भूकम्प प्रतिरोधी घर बने/नबनेको हेर्ने काम थाले ।
फ्यान्टसी फुटबल क्रेज
फ्यान्टसी अर्थात् सपनाको कथा । खेलकुदमा भने ‘फ्यान्टसी’ शब्दले केही वर्षयता बेग्लै पहिचान बनाएको छ । खेललाई फरक ढंगले रोमाञ्चक बनाउन अचेल दर्शकमाझ फ्यान्टसी लिगहरू प्रख्यात भइरहेका छन् ।
सिड्नीमा ओरिजिनल डुओ
चर्चित ब्यान्ड १९७४ एडीका पूर्वसदस्यद्वय फिरोज स्याङ्देन र एड्रियन प्रधान शनिबार सिड्नीका नेपालीमाझ देखिए । ‘द ओरिजिनल डुओ’ नाम दिइएको कन्सर्टमा उनीहरूले एकसेएक आफ्ना चर्चित गीतहरू गाउँदै बिग टप लुनापार्कमा मनोरञ्जन दिलाएका थिए ।